Bolt Partners MAX, na-enye ihe nwe ụgbọ ala maka ihe ruru puku ndị ọkwọ ụgbọ ala Naijiria ruru puku iri.
N'ịbụ onye na-eduga n'elu ikpo okwu na-agba ịnyịnya, Bolt esorola Metro Africa Express- (MAX) - usoro ntinye aha ụgbọ ala maka ụgbọ ala dị ala na efu na Africa - iji gbasaa mmemme ego ụgbọ ala Bolt na Nigeria.
Atụmatụ a bụ akụkụ nke nkwa Bolt iji mee ka ndị ọkwọ ụgbọala na-anya ụgbọ ala nwee ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ dị ala, nkwado na ịkwalite ego ndị ọkwọ ụgbọala na-enweta ma na-enye ha ohere ịnọgide na-enwe mgbanwe dị ka ndị nwe ụgbọ ala.
Mmemme ahụ, nke na-enye ihe ngwọta maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na ikpo okwu Bolt na-eji ụgbọ ala agbazinye ego site na ịzụrụ ụgwọ ma ọ bụ ụdị mgbazinye, na mmekorita ya na MAX.
Mmekọrịta Bolt na MAX ga-ewepụta usoro mgbazinye maka ndị ọkwọ ụgbọ ala e-hailing iji gbazite ụgbọ ala wee kwụọ ụgwọ nkeji nkeji ruo mgbe enwetara ikike zuru oke.
Mmekọrịta ahụ ga-emekwa ka ndị ọkwọ ụgbọ ala Naijiria nwekwuo arụmọrụ ha site n'inweta ọrụ dị iche iche bara uru gụnyere ịnweta ụgbọ ala ikuku na-adị ala na efu; ikike na ikike, mkpuchi; mkpuchi ahụike dị ọnụ ala, yana ngwaahịa ego ndị ọzọ.
N'ikwu okwu na mmekorita ahụ, Femi Akin-Laguda, onye njikwa obodo na Bolt, kwuru:
"Anyị malitere atụmatụ ego ụgbọ ala anyị n'isi mmalite nke afọ a iji mee ka ndị ọkwọ ụgbọala nwee ụgbọ ala ma ọ bụ ọgba tum tum na-akwụ ụgwọ dị ala ma kpebie ịgbasa atụmatụ a iji mepụta ohere maka ndị na-anya ụgbọ ala.
Na mmekorita ya na Max, anyị na-achọ ịgbasa nkwa anyị na-enyere ndị ọkwọ ụgbọ ala n'elu ikpo okwu Bolt aka inweta ọtụtụ na n'ike nke aka ha, ma ọ bụ na-anya ụgbọ ala oge niile ma ọ bụ nwa oge.
Ndị ọkwọ ụgbọ ala bụ isi maka ọrụ azụmaahịa anyị, ọ dịkwa mkpa ịnye azịza na-ahụ na ịnya ụgbọ ala na Bolt na-agbanwe ma na-erite uru n'ihi na imeziwanye ego ndị mmekọ bụ ihe dị mkpa iji kwado ntụkwasị obi na ntụkwasị obi nke anyị nwetara n'oge. "
Onye isi oche na onye nchoputa MAX, Adetayo Bamiduro, kwuru:
“Ahụmahụ anyị maka ngagharị ngagharị nke Africa bụ maka ụdị ụgbọ njem na-ekekọrịta ka ọ bụrụ ụkpụrụ. Anyị na-agba mbọ maka ụwa ebe ndị mmadụ na ngwa ahịa nwere ike ịkwaga n'ụzọ a na-ebu amụma, dị mma na nke ọma na-enwe mmetụta efu na ihu igwe anyị. Mmekọrịta anyị na Bolt dabara nke ọma na ebumnuche a.
Anyị na-anụ ọkụ n'obi banyere ịgbanwe njem ngalaba ọnụ, nyeere anyị ọhụrụ na
ngagharị na-eduga ụlọ ọrụ na akụrụngwa ọrụ ego. "
Chinedu Azodoh, onye rụpụtara MAX kwuru: "Na MAX, anyị na-emepụta ihe ngwọta mgbe niile iji mee ka njem dị mfe, dị nchebe ma na-atọ ụtọ karị.
Nke a bụ ihe na-eme ka anyị lekwasị anya n'ichepụta ihe ọhụrụ na mmekọ atụmatụ. Anyị nwere obi ụtọ maka nke a
ohere iji Bolt gbasaa azịza ndị a n'ihu. "
Site na batch mbụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala abanyelarị na mmemme ahụ, Bolt, na mmekorita ya na MAX, ga-eme
gaa n'ihu na-aga n'ihu ma na-ebelata mmegharị na Nigeria ma na-enye ike na akụ na ụba na-enwetakwu ego
ohere maka ndị ọkwọ ụgbọala.